.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Planet Myanmar Dictionary for Android
Android ဖုန်းတွေသုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ကိုယ်သိချင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေ
ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Planet Myanmar Dictionary လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့အကြောင်း အပြည့်အစုံကို
လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Google Play မှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ
ဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ အားနည်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အရမ်းကို အသုံးဝင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Posted by Thurainlin at 08:14
Labels: Android App, Dictionary